कंगनाले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाउने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरिएको छ ।
निवेदनमा भारतको कानून व्यवस्था कयाम गर्नका लागि कंगनाको प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल पोस्टलाई सेन्सर गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।
यो खबर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कंगनाले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा हा हा प्रतिक्रिया दिएकी छन् । साथै उनले लेखेकी छन्– देशकी सबभन्दा शक्तिशाली महिला ।
अधिवक्ता चरनजीत सिंह चन्द्रपालले निवेदन दायर गरेका हुन् । किसान आन्दोलनका विरुद्ध कंगनाले बयान दिएकोमा उनीमाथि देशभरि लगाइएका एफआईआरलाई मुम्बईस्थित खार प्रहरी कार्यालयमा ट्रान्सफर गर्न र ६ महिनाभित्र अभियोगपत्र दायर गर्नका लागि निर्देशन दिन पनि माग गरिएको छ ।
अनि दुई वर्षभित्र ट्रायल पूरा गर्न पनि माग गरिएको छ ।
निवेदनमा चरनजीतले लेखेका छन्, ‘कंगनाको बयान अपमानजनक मात्र नभई निन्दनीय पनि छन् । यसले दंगा गराउन सक्छ । यसले धार्मिक भावनालाई आहत गर्ने गरेको छ । उनले सिखहरूलाई अपमान गरेकी छन् र देशद्रोही भनेकी छन् । कंगनाको बयान देशको एकताविरुद्ध छ र उनलाई कानूनबमोजिम कठोर सजाय दिनुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालय, सूचना प्रविधि तथा प्रसारण मन्त्रालय र टीआरएआईलाई पनि कंगनामाथि प्रतिबन्धका लागि निर्देशन दिन भनिएको छ ।
'भूल भुलैया २' मा कार्तिकले लिए यति मोटो रकम, कियाराले कति लिइन् ?
बलिउड चलचित्र 'भूल भुलैया २' को मुख्य भूमिकामा छन् कार्तिक आर्यन । उनले चलचित्रमा बाबाको भूमिका निभाएका छन् । एक रिपोर्टका अनुसार, कार्तिकले सो भूमिका निभाउनका लागि १५ करोड भारतीय ...
पूजा र आकाशको ‘सम्झना बिर्सना’ रिलिज हुने मिति सर्‍यो, अब कहिले ?
अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘सम्झना बिर्सना’को प्रदर्शन मिति पछि सरेको छ । आउँदो जेठ ६ गतेका लागि तोकिएको पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन मिति स्थगित गरिए...